LISENETHINI!: Bekuyimpelasonto yezimanga lena, buka iChiefs noBecker benzeni - Impempe
LISENETHINI!: Bekuyimpelasonto yezimanga lena, buka iChiefs noBecker benzeni
Kuningi okwenzekile kule mpelasonto esiphuma kuyo. Kusukela kulo mbango wamaqembu afuna ukukhushulelwa esigabeni esikhulu, iDStv Premiership, phesheya kwezilwandle sibone kuqopheka umlando iLeciester City inqoba indebe yeFA Cup okokuqala emlandweni weqembu.
Nangu nonozinti weLiverpool, u-Allison Becker eshaya igoli ngemizuzu yokugcina lawina iqembu. Empeleni nje ziningi kakhulu izimanga ezigeleka ebholeni kulezi zinsuku.
Into edonse kakhulu amehlo ami ukubona amaqembu akithi amathathu emidlalweni yomkhumulajezi kwiCAF Champions League neCAF Confederation Cup.
Cha, ithwale kanzima iMamelodi Sundowns kwelaseGibhethe ibhekene noPitso Mosimane. Lo mdlalo bengiwulindele ngamehlo abomvu ngoba phela uPitso ubezobhekana neqembu lakhe elidala futhi elakhiwa nguye njengoba silibona liqhubeka nokuzidlela amahlanga nje kwiligi yakuleli.
UPitso neqembu lakhe elisha, i-Al Ahly, benze isiqiniseko sokuthi abayivumeli iSundowns ibambe ibhola isikhathi eside ngoba uyazi ukuthi bayingozi uma ibhola lisezinyaweni zabo.
Uphinde wenza isiqiniseko sokuthi bayawunqoba umdlalo ngoba uyazi ukuthi kuzoba nzima emlenzeni wesibili ePitoli. Engikakusho nje ukuthi ayikapheli le mpi, kuzobe kufiwa emlenzeni wesibili kodwa kuyenyukela manje kwiMamelodi Sundowns.
IKaizer Chiefs ivele yasivala imilomo ngoba besingathembi lutho ngendlela izinto ezibheda ngakhona eNaturena kulezi zinsuku. IChiefs ishaye kalula nje iSimba yaseTanzania. Sibone nomqeqeshi uGavin Hunt ejabulisa okwengane ngoba iqembu lakhe lidlale kahle.
“Uma izinto zingahambi ngendlela abafisa ngayo
enkundleni benza noma yini ukunqoba umdlalo”
Kungenzeka ukuthi imashi yabalandeli isebenzile. Sengingasho nje ukuthi iChiefs seyiwufakile umlenze owodwa kowandulela owamanqamu, okusele nje ukuthi iyoqedela umsebenzi wayo eTanzinia. Kuyangixaka ukuthi kungani iChiefs iyiqwala kalula lentaba yase-Afrika okukholakala ukuthi inzima kakhulu, kodwa iyabaxaka iDStv Premiership.
NgeSonto sibone i-Orlando Pirates ibhekene neRaja Casablanca. Kulo mdlalo ngibone zisuka nje ukuthi Ezimnyama zizothwala kanzima indlela ebelihlasela ngakhona leli qembu laseMorocco. Udonga lwasemuva lwePirates belungaphansi kwenkulu ingcindezi futhi umkhonto ucishe wagwaza ekhaya ngekhanda likaThulani Hlathswayo.
Zimbili izinto engiziqaphelile ngeRaja: Okokuqala leli qembu liyalidlala ibhola futhi abadlali bayo babukhali. Okwesibili ukuthi uma izinto zingahambi ngendlela abafisa ngayo enkundleni benza noma yini ukunqoba umdlalo. Banendluzula futhi banodlame nakunompempe bayazifikela laba bafana. Awucabange ke uma sebedlala ekhaya ukuthi bazobe benjani uma bekwazi ukwenza izinto ezinje ekuhambeni. Yazi
wasixwayisa uPitso eminyakeni edlule ngalamadoda aseMorocco. Kuzofanele baqine ukhakhayi futhi bazibambe ziqine abafana beZimnyama ngoba kuzoba nzima emdlwalweni olandelayo.
Previous Previous post: Ibuyele odakeni sekuthembisa ukuthi iyaphuma iChippa
Next Next post: Limi ngothi kwiChippa, kodwa uHeric uthi bazosinda ezembeni